Isaiah 48 NIV – Yesaia 48 ASCB | Biblica
Isaiah 48 NIV – Yesaia 48 ASCB
1“Montie yei, Ao, Yakob fiefoɔ
mo a wɔde Israel din frɛ mo,
na moyɛ Yuda asefoɔ,
mo a mobɔ Awurade din ka ntam,
na mofrɛ Israel Onyankopɔn,
nanso ɛnyɛ nokorɛ anaa tenenee mu;
2mo a mofrɛ mo ho kuro kronkron no mma
na mode mo ho to Israel Onyankopɔn so.
Asafo Awurade ne ne din.
3Nneɛma a atwam no medii ɛkan kaeɛ,
mebɔɔ nkaeɛ, na medaa no adi;
afei mpofirim mekekaa me ho na ɛbaa mu.
4Na menim sɛdeɛ moyɛ asoɔden.
Mo kɔn ho ntini yɛ dadeɛ
na mo moma yɛ kɔbere mfrafraeɛ.
5Enti, mekaa saa nneɛma yi kyerɛɛ mo dadaada.
Ansa na ɛrebɛsisi no mebɔɔ mo nkaeɛ
sɛdeɛ morentumi nka sɛ,
‘Mʼahoni na ɔyɛeɛ:
me dua nsɛsodeɛ ne me dadeɛ nyame na ɔhyɛeɛ.’
6Moate yeinom nyinaa; moahunu ne nyinaa.
Morennye nto mu anaa?
“Ɛfiri saa ɛberɛ yi de rekorɔ mɛka nneɛma foforɔ akyerɛ mo,
nneɛma a ahinta a monnim.
7Afei na ɛreba koraa, ɛnkyɛreɛ;
ɛbɛsi ɛnnɛ no, na anka montee ho hwee da.
Enti morentumi nka sɛ,
‘Aane na menim dada!’
8Wonteeɛ, na wontee aseɛ;
ɛfiri tete nyinaa wʼaso asi.
Na menim sɛ woyɛ ɔfatwafoɔ;
wɔfrɛɛ wo otuatefoɔ firi yafunu mu.
9Medin enti metwentwɛne mʼabufuo so;
mʼayɛyie enti meyi firii wo so,
sɛdeɛ mentwa wo ntwene.
10Hwɛ, mahoa mo ho, nanso ɛnyɛ sɛdeɛ wɔhoa dwetɛ ho;
mmom, masɔ wo mahwɛ wɔ amanehunu fononoo mu.
11Me enti, me enti, na meyɛ yei.
Adɛn enti na ɛsɛ sɛ mema ho kwan na wɔsɛe me din?
Memma obi nnye mʼanimuonyam.”
12“Tie me, Ao, Yakob,
Israel a mafrɛ no;
Me ne no;
Me ne Ahyɛaseɛ ne Awieeɛ.
13Me ara me nsa na ɛtoo asase fapem,
na me nsa na ɛtrɛɛ ɔsorosoro mu;
sɛ mefrɛ wɔn a,
wɔn nyinaa bɔ mu sɔre.
14“Mo nyinaa mommɔ mu mmra mmɛtie:
ahoni no mu deɛ ɔwɔ he na waka saa nneɛma yi dada?
Awurade ɔboafoɔ a wapa no
bɛma nʼatirimpɔ a ɛtia Babilonia aba mu;
ne basa bɛtia Babiloniafoɔ.
15Me, me na makasa;
aane, mafrɛ no.
Mede no bɛba,
na ɔbɛwie nʼadwuma nkonimdie so.
16“Montwe mmɛn me na montie yei:
“Ɛfiri nkaebɔ a ɛdi ɛkan no, menkasaa kɔkoam;
ɛberɛ biara a ɛbɛsi no, na mewɔ hɔ.”
Na afei Asafo Awurade
de ne Honhom asoma me.
17Yei ne deɛ Awurade seɛ,
mo gyefoɔ, Israel Kronkronni no:
“Mene Awurade mo Onyankopɔn,
deɛ ɔkyerɛ mo deɛ ɛyɛ ma mo,
na ɔkyerɛ mo ɛkwan a ɛsɛ sɛ mofa soɔ.
18Sɛ modii mʼahyɛdeɛ so a,
anka mo asomdwoeɛ ayɛ sɛ asubɔnten,
na mo tenenee ayɛ sɛ ɛpo asorɔkye.
19Anka mo asefoɔ ayɛ sɛ anwea,
na mo mma ayɛ sɛ nʼaboseaa a wɔntumi nkane;
wɔn din rempepa da.
Wɔrensɛe mfiri mʼanim.”
monnwane mfiri Babiloniafoɔ nkyɛn!
Momfa osebɔ nteam mmɔ nkaeɛ
na mo mpae mu nka yei.
Momfa nkɔ nsase ano;
monka sɛ, “Awurade abɛgye ne ɔsomfoɔ Yakob.”
21Osukɔm anne wɔn ɛberɛ a ɔdii wɔn anim, wɔ anweatam ahodoɔ so no,
ɔmaa nsuo firi ɔbotan mu ba maa wɔn;
ɔpaee ɔbotan no mu, maa nsuo tue firii mu.
22“Asomdwoeɛ nni hɔ mma amumuyɛfoɔ.” Sei na Awurade seɛ.
ASCB : Yesaia 48